Fifanakalozana ara-barotra – Malezia : varavarana misokatra ny any Atsinanana | NewsMada
Fifanakalozana ara-barotra – Malezia : varavarana misokatra ny any Atsinanana
« Varavarana misokatra ho an’i Madagasikara ny any Atsinanana », hoy ireo mpandraharaha malezianina nandalo teto Madagasikara ny herinandro lasa teo. Efa raketin’ny tantara hatramin’ny taonjato maro ny fifandraisana voalohany eo amin’ny tany aziatika sy Madagasikara eo amin’ny varotra sy ny fandraharahana. Manaporofo izany ny fisian’ireo teratany karana mitrandraka ny sehatra ara-barotra. Amin’izao taonjato izao, fironana any amin’ny tany Tatsinanana no vahaolana ahitana tombontsoa betsaka amin’ny fandraharahana. Manana ny anjara toerana lehibe amin’izany i Malezia amin’ny alalan’ny Matrade, miara-miasa amina vondrona iraisam-pirenena maro sy ny fiarahan’ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana (3 P).
Voalohany ny Matrade tonga eto Madagasikara, nijery izay fomba hifanakalozana sy hahamora ny fiaraha-miasa amina mpandraharaha malagasy. Manana ny solontenany rahateo ny firenena malezianina (consulat) monina eto an-toerana. Nohazavain’ireo mpandraharaha malezianina ny dingana nolalovan’izy ireo teo amin’ny fampandrosoana toekarena any aminy, nanomboka ny taona 1975 hatramin’ny 2015. Niainga avy amin’ny fambolena ihany ary ankehitriny, manana karazana indostria manodina karazam-bokatra maro ry zareo Malezianina.
Tsy maharaka ny tolotra
Manafatra vokatry ny tany, toy ny kafe, jirofo, lavanila, vokatra an-dranomasina avy aty Madagasikara i Malezia. Nanomboka ny taona 1993, manana politika mazava ho an’ny fanafarana entana avy aty Afrika ho an’ireo indostria any aminy i Malezia. Madagasikara, anisan’ireo firenena afrikanina 17 aty atsimon’i Afrika, manana fifandraisana ara-barotra aminy. Ny olana anefa, tsy maharaka ny tinady any amin’io firenena io sy ireo firenena aziatika maro ny tolotra avy aty amintsika.
Nandritra ny dian’izy ireo ihany koa no nampahafantarany ny MHTC (Malaysia Healthcare Travel Council), fitsaboana any Malezia. Ireo hopitaly manara-penitra fitsaboana karazana aretina rehetra. Naseho tamin’izany ireo mpitsabo manampahaizana manokana sy ireo fitaovana araka ny fivoaran’ny teknolojia. Saram-pitsaboana mora kokoa raha oharina any amin’ny firenen-kafa, saingy mbola nofinofy izany ho an’ny vahoaka malagasy.